महिलाहरु मलामी किन जानु हुन्न ? कारण यस्तो रहेछ - NepalTrending
काठमाडौँ । हिन्दु धर्मको परम्परा अनुसार, मृत शरीरलाई जलाउने बेला महिलाहरूलाई मलामी लानुहुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर, किन थाहा छ?आजको यस धर्मको अङ्कमा, हामी तपाईँहरूलाई प्राचीनकालमा महिलाहरूलाई किन मलामी लान्थेनन् भनेर केहि कारणहरूको जानकारी दिन गैरहेका छौँ।
यो पनि पढ्नुस् : पुरुषको तालु खुइलिन्छ तर महिलाको यस्तो हुन्न किन ? यस्तो छ कारण